Lọ ọrụ ndị ntorobịa na-eme mkpọtụ banyere ime ihe ike n'ihi na 'nlekọta' bụ n'ezie mmetọ? : Martin Vrijland
Minista Sander Dekker (ị maara ndị ikpe ndị ahụ, onye nwere ike ịhụ onye ọ bụla dịka ezigbo ọgọ nwa nwoke, mana ikekwe anụ ọhịa wolf na uwe atụrụ) kwuru na-awụ akpata oyi n'ahụ n'ihi ịdị ike nke ihe merenụ na-elekọta ndị ntorobịa. Dika, Sander, ikekwe nke a bụ n'ihi na George Orwell akọwaworị ihe dị n'akwụkwọ ya 1984 akụkọ banyere ya bụ. N'akwụkwọ ahụ, a kọwara ya na okwu dịka 'nlekọta' nwere ike ịpụta mmetọ na ọtụtụ ụdị egwu ahụ. Egosiiri m nke ahụ na ihe ndekọ igwefoto m zoro ezo na ọnọdụ "nlekọta ntorobịa" na 2013 (lee vidiyo dị n'okpuru). A chụrụ onye isi ụlọ ọrụ ahụ na Heerhugowaard n'ihi ndekọ ndị a, na-emezigharịrị usoro ntakịrị, mana n'ezie nke bu ebumnuche ka ịhapụ ndị na-eme nchọpụta ka ọ ghara ịbanye na ọdịnihu.
Vidio ahụ na-enyetụ nghọta maka ụjọ nke ụlọ ọrụ dị otú a. Emere m ihe ndekọ a mgbe ada nke otu enyi m kwụsịrị n'ụlọ ọrụ dị otú a. N'ihi na o nwere aru ọkụ, enwetara anyị nnabata ma enwere m ike iji igwefoto zoro ezo na-ese ihe. Site na ekwentị ekwentị zoro ezo, nke m zoro ezo na matarasị nke ihe ndina ya, ọ na - enwe ike ịdekọ ụda nke mmejọ nke onye agbata obi ya (site n'aka ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ). Will ga-anụ nke ahụ na njedebe vidiyo ahụ. Na akụkụ mbụ nke vidiyo ọ na-akọ otú ọ ga-esi kọọ akụkọ ọ bụla ọ na-eme na mpụga n'ọnụ ụzọ. Egwu dị mma maka ndị nọ n'afọ iri na ụma na-enweghị ihe ọ bụla dị mkpa banyere aha ha, mana naanị nwee oge ntorobịa siri ike ma ọ bụ ọnọdụ ụlọ. Ma n'ezie nke a bụ nnyochi na ntupu nke veel. Akụkọ ndị a kọọrọla m ọtụtụ ndị bi ebe a (naanị) ụlọ akwụkwọ a bụ nke ụwa a! Dị oke egwu na-enweghị onye hụrụ ya! Ubi mara mma na ụlọ dị mma, mana n’ime ya bụ hel n’elu ụwa.
N’oge gara aga, ekwere gị ka ị bụrụ onye tozuru etozu; N'oge a, akpọchibidoro gị n'ụlọ nga. Ọ bụrụ na papa gị na mama gị akpọchibido gị n'ụlọ, ha ga-enweta aha ọjọọ; ọ bụrụ na onye ọrụ nlekọta ntorobịa enye gị "ihe mgbu" (gụọ: tie ụra n'etiti onwe gị) ma ọ bụ pịpị na sel iche, nke ahụ bụ mmụta na "ọ dị mkpa". Nke ahụ ọ dị na mberede? Ebee ka anyị mechara kwụsị!?
Akọnuche nke ndị ọrụ ntorobịa a dị ka ihe apụrụghị aka na ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ịgbazite ụlọ na ụmụ Nike kacha ọhụrụ. O yiri ihe siri ike na ụgwọ ọnwa mgbe niile na-akwụsị akọ na uche. Akọnuche onye ọrụ na-elekọta ndị na-eto eto nwere ike zute echiche nke 'befehl ist befehl'. Ugbu a ị nwere ike ịchọpụta ụdị mmụọ ahụ ma kwenye n'ezie na enwerekwa ọtụtụ ndị nwere ezi obi maka okwu ahụ. Ndo, mana enwere ike obughi n’efu, na enwere otutu ihe ike megide ndi oru ntorobịa. Enweela m ọtụtụ (mgbake: M pụtara ọtụtụ) mkpesa banyere nlekọta ndị ntorobịa. Ọtụtụ ga-ekwu maka! N'akụkụ ahụ, aghaghị m ịgbanye ụgwọ iji nye mkpesa niile ahụ. O buru oke ibu ma nwee mmetuta oke!
N'echiche m, nlekọta ndị ntorobịa abụghị nchegbu. Anyị na-ahụ ogige ezigharị egwu dị egwu ebe a na-eleghara mmadụ niile anya. Ewoo, anyị anaghị agba ya ama, maka na anyị anaghị ahụ ya. Ọ na-eme na sinik; n'azụ ụzọ mechiri emechi na ogige dị mma. Ckingkpọchi ndị ntorobịa dị aghụghọ nke ụlọ ha nwere ike ọ gaghị aga nke ọma ma na-achịkwa ihe akpọrọ "mkpali mgbu" gụnyere mkpọchi mkpụrụ ndụ dịpụrụ adịpụ, bụ nke dị njọ karịa Medieval. Mgbe ahụ onye ụkọchukwu dị otú ahụ nwere uwe dị mma na iko ya na uwe ya nwere ike ikwu na 'ọ wụrụ ya akpata oyi n'ahụ', mana maka nke ahụ abụghị ihe ọ bụla karịa wolf na uwe atụrụ na-asị 'beh'. Nlekọta ahụ niile nke ndị ntorobịa bụ sekit nke ụlọ ọrụ na - enweta ezigbo ego na "ọrụ" ma na - adọta ego gburugburu n'ofe azụ ụmụaka na-enweghị ihe ọjọọ. Ọ ghọọla ezigbo ụlọ ọrụ!
M ga-asị: Gị Sander Dekker nọrọ otu ụbọchị n'ụlọ mkpọrọ mara mma (n'ihi na enweghị ụlọ ọzọ nwere mkpọchi koodu PIN na "ụlọ ọrụ") na ụlọ ọrụ "nlekọta" dị ntorobịa. Nwee ogwe aka mara mma ma obu mmachi maka ihe nlere ka ị tụnye na sel ịnọpụ iche iji wee jụụ (gụọ: ike gwụrụ ma nwee nkụda mmụọ kpamkpam n'ala). Mgbe ahụ anyị ga-achọ ịhụ gị ọzọ na uwe gị mara mma na eriri. Hụ ma ị ka nwere nkata.
Might nwere ike jụọ: Ọ bụ ihe dị omimi na ime ihe ike megide ndị ọrụ ntorobịa 'nlekọta' na-ebilite ma ọ bụ ihe ijuanya na ndị ọrụ a yiri ka ha anaghị enwe akọ na uche karịa. Kedu ihe dị na Netherlands, bụ mba nke o yiri ka onye ọ bụla na - ejide aka ibe ya iji mezie omume rụrụ arụ ma bulie mmebi iwu na ịdị ọcha? Hasnye nwere ike iji nwetaghachi akọ na uche na ịkwụsị ụdị egwu ahụ? Onye oma onye? (Lelee vidiyo na nkwupụta)
Ihe ndekọ njikọ njikọ: nu.nl
Gbuo umuaka gi ma wee nweta 2 afọ dika okwu Yasmine M. taa
Ọtụtụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ maka steeti, n'ihi ya, nkatọ nke steeti na-apụ n'anya
Tags: nyefe, Dekker, agba, Heerhugowaard, ndị ntorobịa, elekọta ụmụaka, onye ozi, mgbịrịgba mberede, Sander, ụlọ ọrụ ahụike
Ekekọrịta kesaa share share !!
Biko Buru n'uche: Facebook ga-egbochi ozi a na usoro iheomume nke ndị mmadụ n'ihi na ha na-ahụ ya “adịghị mkpa” (gụọ nyocha obodo), yabụ jiri ozi nkeonwe, WhatsApp ma ọ bụ ihe ọ bụla kekọrịta ya!
Ihe kacha njọ bụ na ọtụtụ ndị anaghị atụ ụjọ ịkekọrịta isiokwu ... maka ụjọ na ndị ọzọ ga-achị ha ọchị kama ịghọta na ihere ga-emechu onwe ha ihu.
Anyị na-ahụ oge ugboro ugboro ka ndị ọchịchị kwuru na ha na-alụ ọgụ megide ikpe na-ezighị ezi na-eme otu ụdị nnukwu ikpe na-ezighị ezi. Ndị Allies ga-achụpụ ndị Nazi, mana gbagbuo Dresden na oke nke Winston Churchill mgbe agha ahụ biri. Ndị Nazi na-egbu ndị mmadụ n’efu, mana "ndị nzọpụta" mere otu ihe ahụ. N’agbata ajụjụ onye nyere ego Adolf Hitler ego (ọ bụghị na ego nke ndị Zionist na-esite na US?): Nazism ọ̀ kwụsịrị ịdị adị? Ka ihe si na Adolf Hitler pụọ n'anya ya ọ̀ bụ mmalite nke nwughari okike nke fasizim na jaket ọchịchị onye kwuo uche ya ọhụrụ?
Ọfụma na anyị ka nwere onyonyo .. nke ahụ bụ etu o siri gaa agha ahụ (lee befehl ist befehl Shots the all "saviors").
A maghị ebe agụmakwụkwọ Soviet dị ka gulag taa, ogige ndị ịta ahụhụ Nazi enweghịkwa ụdị ahụ jọgburu onwe ya. N'oge a, a na-akpọ ya ụlọ ọgwụ GGZ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nlekọta ndị ntorobịa. Anyị aghọọla ọkaibe ma tinye ihe niile na jaket okwu mkparịta ụka mara mma nke Orwellian, ka onye ọ bụla ghara inwe akọ na uche. Ọnụ ụzọ dị mma n'anya ma na-edozi ogige ahụ ma ọnụ ụzọ ụlọ ahụ nwere ọmarịcha ịchọ mma yana mkpọchi mkpọ.
Onu ogugu onwu di na 25 puku, ma nke a sitere na echiche Churchill nke "Akuko dere site na onye mmeri"
N’ezie, anyị na-ekwu maka ihe ruru otu narị puku mmadụ ka nde mmadụ nwụrụ mgbe bọmbụ a gasịrị. Agbanyeghị, ekwuputala ọzọ na ọ bụ neo-Nazis ndị na-akpọ nọmba ndị ahụ. Onye mmeri na-edeghachi akwụkwọ nta akụkọ ihe mere eme (na ọ na-apụta nke ọma).
Ọ bụ otu nnukwute ebili mmiri nke bọmbụ na-esote ọkụ na-esochi nnukwu ọkụ nke bibiri ihe niile dị ndụ. Mara: agha agaalalarị!
Kedu ihe kpatara m jiri biputere ihe ndị dị n’elu?
Iji gosipụta na anyị ka bi n'okpuru ọchịchị na-ezighi ezi; Ọchịchị na-egbochi ndị mmadụ ma tinye ha n'ogige. Ogige ndị ahụ dị ntakịrị karịa, nwekwaara aha nlekọta na ndị ọrụ nwere ụgwọ ọrụ dị mma, Volkswagen dị ọcha na ogige nke ọma.
A na-eji akọ na - akwụ ụgwọ akọnuche nke ndị ọrụ site na ịkwụ ụgwọ ma na-ekerịta akụkọ banyere ọrụ na oriri na oriri na oriri kọfị.
Grappemaker nwere uto maka ya mgbe Wiersum psyop gasịrị
dikwa Dresden ... nke ọma na-enyo enyo na ị nweghị ike ịgbanahụ ya
Oge ọ bụla ụdị nsogbu a na - akpọ nsogbu na - eme ka ị kpachara anya na oku maka idozi, ịlụ ọgụ ma ọ bụ itinye aka. Na-esote, na-esiwanye ike na iwu na-abịa. Inwekwu nchedo na ike maka onye ọrụ ntorobịa. Mechie ọnụ ma mee ihe ekwuru ma ọ bụ ihe ziri ezi ma ọ bụ na ezighi ezi. Site na mmechuihu na nke nzuzu na-adighi nma, a na-amanye ndi mmadu ka ha na onye hare ahia ha. A na-abịaru gị nso ma na-emeso gị ihe dịka osisi dị ka onye mkpọrọ US max iche. Really bụ n'ezie ihe n’ihe ndị a. Nice ọha, nri? Haha ee befehl ist befelh sochiri software nke ọma, ihe ọ bụla na-adabaghị na ya bụ ihe a na-ahụ anya dị oke egwu. Ewepụghị bụ “ahụhụ” na sistemụ ha. Ọtụtụ mgbe, ha enweghị ụmụaka nwere onwe ha, mana ha chọrọ iso “nke nta” dịka otu akwụkwọ siri kwuo. Ọ fọrọ obere ka ọ dị ka ngwaahịa? Ikwesiri idowe “ya” n’ebe ozo di nma ma o buru na a ghaghi eme ka nchekwa ezin ul o gi. Dịka ezigbo onye mkpọrọ. Never maghị hey?
Hey Martin ugboro ugboro thx maka ihe ọmụma. Daalụ maka ịkekọrịta ihe ọmụma gị, ekele dị ukwuu. Mgbe ụfọdụ ana m ekerịta akụkọ gị. Mana ndị mmadụ na-eche na ara na-agba m. Ma ọ bụ, ndị mmadụ na-echegbu onwe ha banyere ihe ụfọdụ ma ọ bụ na-abịa ụdị ụdị oke ihe dị egwu. Ọ baghị uru ịdị elu nke ọgụgụ isi ahụ, ruo mgbe ọnụnọ nke ịdị elu dị elu na-amalite igwu egwu ma ọ bụ isi na-agbada n'ájá. Ma ọ bụ, ha na-emegide gị. Amalitere m ịlụ ọgụ banyere ya mgbe m kwuru banyere isiokwu ndị a.
Ejirila aka gị emetụ ụwa ha aka n'ihi na mgbe ahụ ị ga-emetụ ha aka, ha ga-akwụ gị ụgwọ. Nwere ike ịkwụ ụgwọ ọzọ?
Dị nnọọ ka ndị mmadụ kpọgidere amoosu, ị ga-eme ụdị ndị na-emegbu ndị mmadụ.
Nzaghachi mara mma n’aka gị. Ọ dị mma, ịtụ anya ụgbọelu site na ndị nkịtị n'ihi na ụjọ na-atụ ha niile. Ha na akwaghari nkea dika o kwere omume site na inagide nsogbu ndi otu a ka enwere ike wee soro ihe ndi edobere. Netherlands, Madurodam, nwere ike njọ karịa GDR mbụ. Lee, ha egwu karie. Ndi nwere uche ojoo di na Netherlands na achu nta, togburu onwe ya, mechie onwu, wdg. O buru na nsogbu ju gi ebe i gha enweta ihe nzuzu, n'ezie ndi umuaka nzuzu ndi you maara. N'ihi na ndị dike anaghị arụ ọrụ na flu. N'ihi na ọnọdụ ụmụ nwoke nwoke ga-emerịrị n'ụzọ niile. Amachibido iweghachite ọnọdụ ahụ ọnụ ọgụgụ nkịtị. A ga-agbaso edemede ahụ.
Ihe ndị a agaghịzi adị na nzuzo. Ọ bụrụ na iwu gafere n'ime ụlọ na a ga-ezo aka na onye ọ bụla, ezinaụlọ, ndị enyi ma ọ bụ ndị agbata obi dị ka onye nwere ike ịgbagha agbagha, mgbe ahụ ọgụgụ isi na-abịa naanị iburu gị na-enweghị enyemaka nke onye ọka iwu ma ọ bụ ndị isi mgbaka.
Ekele dịrị Thijs H. PsyOp, Ruinerwold PsyOp na ọtụtụ ndị ọzọ site na afọ gara aga.
Nke a bụ otu ị si ehicha ndị a na-emeghị mkpocha ebe ndị ọzọ na-ebi ezigbo ndụ dịka onye ọrụ GGZ (ndị nche ọhụrụ).
Ee, ọ bụ eziokwu na anyị bi n’ọchịchị dị nwayọ, n’ụzọ aghụghọ nke ọchịchị. Oge mgbanwe ga - agbanwe ngwa ngwa o kwere omume mgbe ahụ ọnụọgụgụ mmadụ ga - emecha biri n'obodo nke aka ha ma ọ bụrụ na ha enweghịzị ọnọdụ ha bụ isi na ha bi ezigbo ndụ, ogologo oge, ogologo.
" Oghere ojii ahụ nke NASA sere foto bụ plasma plasma
Akwụkwọ ọhụrụ Martin Vrijland 'Ihe mere dịka anyị siri hụ na ọ dị njikere' maka nnyefe! »
Nleta nile: 13.972.827